Taliban inomhanya Islamic Emirates yeAfghanistan inoda Vakadzi neAmnesty
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Taliban inomhanya Islamic Emirates yeAfghanistan inoda Vakadzi neAmnesty
Afghanistan Kuputsa Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Taliban Press Musangano
Iyo chaiyo nyaya iri kuburitswa.
A'dead 'Taliban mutungamiriri ari kutora misangano muKabul, achivimbisa kuchengetedzeka kuna vanachiremba, vezvemabhizinesi.
Mutauriri weTaliban akatiwo pamusangano wevatori venhau, hurumende yake nyowani ichavimbisa kodzero dzevakadzi pasi pemiganhu yeIslam 'zvichitevera kutora kweAfghanistan.
VaTaliban vakazivisa ruregerero kune vese vakuru muhurumende yeAfghanistan uye vakavadana kuti vadzokere kumabasa.
Kudanwa kunouya pasingasviki mazuva maviri varwi veTaliban vapinda muPresidential Palace uye vazivisa hondo muAfghanistan yapera.
VaTaliban vanonzi vachiri kutaurirana chibvumirano chepamutemo chekugovana nevatungamiriri venyika.
Kugamuchirwa kune vane hushamwari Taliban anotonga iyo nyowani Islamic Emirate yeAfghanistan!
Zvichakadaro, Enamullah Samangani, nhengo yekomisheni yeTaliban, akataura kuti vakadzi vanofanirwa kubatana nehurumende yavo nyowani. Akadanawo kuti "mativi ese" ajoine hurumende nyowani.
Panguva imwecheteyo, zvitoro muKabul zvinotengesa burqas zvaiita bhizinesi nekukurumidza uye vakadzi vashoma vakaonekwa mumigwagwa yeKabul neChipiri, sekutaura.
Panguva yemusangano weUN Security Council neMuvhuro pamusoro pematambudziko muAfghanistan, Mumiriri weUN wenyika, Ghulam Isaczai akati vagari veKabul vazivisa kuti nhengo dzeTaliban dzakatanga kutsvaga kweimba neimba dzichitsvaga vanhu vaishandira pamwe nehurumende.
Taliban Fighters vanotora Kabul
Vakati zvakare vakatambira nhoroondo dzekupondwa kwevanhu uye kupazwa muguta guru
Mutungamiri weUS, Joe Biden, mune hurukuro paterevhizheni kubva kuEast Room yeWhite House neMuvhuro masikati, akati "Ndakamira padivi pechisarudzo changu" chekuburitsa mauto eU.S. kubva kuAfghanistan uye kuti aisazo "derera kubva pachikamu changu chebasa. zvatiri nhasi. ”
Biden akabvuma kuti manejimendi ake aisatarisira kudonha nekukurumidza kwehurumende pamberi pevanhu veTaliban. Hutungamiri hweUS Democratic hwakaona kuti chibvumirano chekubvisa chakatanga kutaurwa nevaimbove Mutungamiri Donald Trump.
Misoro inosvika kune uyu akashinga CNN Reporter:
Mumigwagwa yeKabul nhasi- tinzwe tiri kuona nhoroondo pic.twitter.com/wcVKzbT6oJ
A tweet inopfupisa kutya:
Unoziva here kuti vakadzi vanotya sei muAfghanistan izvozvi? Ehe, iwe unogona kumira uye kutora pikicha navo. Asi vakadzi veAfghan havatombobvumidzwa kushanda.
kana Taliban kunyoresa huranda, kubata chibharo, kuroora kwemwana (kushungurudzwa), uchazvigamuchira here? Ndeipi miganhu yako kana zvasvika pakuchengetedza kodzero dzevanhu? Haurongere kumira wakamira uchipesana nevanoomerera uye vavengi vevanhu zvachose?
Kururama: Iyo Media Line
Icho Chisimbiso Chitsva cheIslamic Emirates yeAfghanistan